श्रीमान-श्रीमती कसरी सुत्ने ? हेर्नुहोस् यसो भन्छ वस्तुशास्त्र ! - Mitho Khabar
April 25, 2020 mithokhabarLeaveaComment on श्रीमान-श्रीमती कसरी सुत्ने ? हेर्नुहोस् यसो भन्छ वस्तुशास्त्र !
वास्तुशास्त्रका अनुसार दम्पतीबिचको सम्बन्ध प्रगाढ नहुनुको कारण वास्तुदोष भएको बताएको छ। जसको कारण दम्पतीबिचमा मात्र नभएर परिवार, समाज र आफन्तहरुबिचमा पनि सम्बन्ध राम्रो हुन सक्दैन् । शास्त्रमा उल्लेख भएअनुसार सुत्ने कोठाको बारेमा केहि नियमको पालना गरेमा यस्ता समस्या हल भएर जाने बताइएको छ । सबै दम्पतीको चाहना आफू र आफ्नो परिवारमा कुनै पनि किसिमको समस्या सिर्जना नहोस् भन्ने हुन्छ, यसको लागी वास्तुशास्त्रमा ध्यान केन्द्रित गरी यसरी अघि बढ्नुहोस् ।
६. कुन साइडमा सुत्ने
प्रचण्ड र माधव नेपालले कोटेश्वरमा बनाए ओलीलाई बालुवाटारबाट लखेट्ने येस्तो ‘प्लान’ !
कोभिड-१९ का बिरामी भेटिए छैन उपचारका लागि आइसियू
यौन सम्पर्कपछि पनि ‘कुमारी बन्न त्यसको उपचार गैरकानुनी हुनुपर्ने माग